Dr Cabdiweli Gaas: Lacagtii lagu qabtay Muqdisho 3.6 milyan waxaa loogu talagalay Ciidamada Puntland | SAHAN ONLINE
Dr Cabdiweli Gaas: Lacagtii lagu qabtay Muqdisho 3.6 milyan waxaa loogu talagalay Ciidamada Puntland
GAROOWE – Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shaaca ka qaaday in lacagtii 8dii bishan lagu qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho qeyb kamid ah loogu talagalay Ciidamada Badda Puntland.
Dr Cabdiweli Gaas oo waraysi siiyay Laanta Af Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in markii lacagtaas la qabtay uu la xiriiray Safiirka Imaaraadka carabta isla markaana u xaqiijiyay in qeyb kamid ah oo gaaraysay 3.6 milyan loogu talagalay Ciidamada Puntland ee ay tababareen Imaaraadka Carabta.
Waxaa la xiriiray Safiirka Imaaraadka Carabta, wuxuu ii sheegay in lacagta 9.6 milyan ee lagu qabtay Muqdisho in 3.6 milyan loogu tala galay ciidanka Puntland, saas ayay noogu caddeeyeen”ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Waxa kaloo uu sheegay in Madaxda Federaalka Soomaaliya ay la wadaageen macluumaadkaas ayna kala hadleen sida uu yiri Madaxweyne Gaas.
Dowladda Federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in Imaaraadka carabta dib ugu celinayso lacagtii 9.6 milyan oo dollar,iyadoona qabashada lacagtan ay keentay mugdi sii-galay xiriirka labada dal.